🥇အကောင်းဆုံး CFTC ထိန်းညှိပွဲစားများ 2022 |2ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန် 2022 ခုကို လေ့လာပါ။
အကောင်းဆုံး CFTC ပွဲစားများ 2022
ကုန်စည်နှင့်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (CFTC) ဘဏ္environmentာရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုအုပ်ချုပ်ရန်တာ ၀ န်ယူသည့်အခွင့်အာဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်စည်းမျဉ်းအဖွဲ့သည်အမေရိကန်အခြေစိုက်ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ ကုန်သွယ်မှုခရီးကို စတင်ပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ပွဲစားတစ်ဦးကို ရှာဖွေနေသေးသည်ဖြစ်စေ - CFTC ၏အကြိုက်များမှ လိုင်စင်များပါသည့် ပလပ်ဖောင်းများကို သင်မြင်ဖူးကြပေမည်။ FCA နှင့် ASIC အနည်းငယ်အမည်ပေးရန်။ မသမာသောကုမ္ပဏီများမှ သင့်ကိုကာကွယ်ရန် ဤရုပ်အလောင်းများကို ဖန်တီးထားသည့်အပြင် သင့်ရန်ပုံငွေအတွက် ဘေးကင်းရေးပိုက်ကွန်တစ်ခုပေးထားသည်။
ဒီစာမျက်နှာတစ်လျှောက် CFTC ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်ရှာဖွေတဲ့အခါသင်သတိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။ ကျနော်တို့ 2022 ၏အကောင်းဆုံး CFTC ပွဲစားများဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်နိဂုံးချုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် CFTC သည်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပွဲစားများအားသူတို့၏လုပ်ရပ်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏ဂရုစိုက်မှုအတွက်တာဝန်ယူစေရန်စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများချမှတ်ခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုများရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် CFTC နှင့် SEC (Securities and Exchange Commission) စတော့ရှယ်ယာအနာဂတ်မြင်ကွင်းကိုအုပ်ချုပ်ရန်မြင်ကွင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကုန်စည်ဒိုင် Future Modernization Act ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် Dodd-Frank အက်ဥပဒေက CFTC ၏စွမ်းအားကိုလဲလှယ်ရေးစျေးကွက်များသို့ချပြခဲ့သည်။ CFTC ပွဲစားများအတွက်လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်အသစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
လျင်မြန်သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုရှေ့ဆက်ပြီး CFTC ၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ ငွေကြေးအရ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ တည်ငြိမ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသောစျေးကွက်များကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့စေရန်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အေဂျင်စီသည် National Futures Association (NFA) နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ဘေးကင်းလုံခြုံသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်စေရန် သေချာစေပါသည်။
ပွဲစားများအပေါ် CFTC ဘာတောင်းဆိုမှုများ?
ပွဲစားများအပေါ် CFTC ကချမှတ်ထားသောတောင်းဆိုချက်များကိုကျယ်ပြန့်သည်။ ဘဏ္financialာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ (ဥပမာပွဲစားများ) သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကော်မရှင်ထံမှလိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။ ပွဲစားကုမ္ပဏီသည်တိကျခိုင်မာသည့်လိုက်နာမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ၊ ဖောက်သည်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မှုကိုပြသရန်လိုအပ်သည်၊ အများပြည်သူအတွက်ဘဏ္productsာရေးထုတ်ကုန်များကိုမပေးနိုင်မီ၊
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဘဏ္spaceာရေးနယ်ပယ်တွင်တရား ၀ င်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမပြုမီဖြည့်ဆည်းပေးရမည့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေအနေများရှိသည် CFTC မှပွဲစားများအပေါ်အဓိကတောင်းဆိုချက်များကိုဖော်ပြထားသည့်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွထားရှိပါသည်။
AML / CTF နှင့် CDD
ဘဏ္spaceာရေးနယ်ပယ်ကိုလူတိုင်းအတွက်လုံခြုံပြီးပွင့်လင်းမြင်သာသောနေရာအဖြစ်ထားရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ AML (ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး) နှင့် CTF (အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး) ဌာနခွဲများသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ CDD (သုံးစွဲသူအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်း) သည်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
CFTC ပွဲစားများအားလုံးအတွက်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်မှာ Customer တစ် ဦး ချင်းစီအားစာရင်းသွင်းစဉ် Know Your Customer (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပွဲစားများသည် KYC ၏အဆင့် ၄ ဆင့်ကိုလိုက်နာရမည်ဟုစည်းမျဉ်းများကဖော်ပြသည် -
ဖောက်သည်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ပါ။
ဤသည်မှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းကိုမှတ်ပုံတင်သည့်အခါတိုင်းဓာတ်ပုံနံပါတ်နှင့်လိပ်စာအထောက်အထားကိုသင်ပြရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ CFTC ပွဲစားသည်ပြthe္ဌာန်းထားသောစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီးသင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ နေထိုင်ခွင့်လိပ်စာနှင့်ဓာတ်ပုံ ID (သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) တောင်းခံရမည်။
ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သော ၃ လ၊ လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံအချို့ မှနေ၍ သင့်အားတရားဝင်စာသို့မဟုတ်သက်သာခွင့်ငွေတောင်းခံလွှာကိုတောင်းလိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အလေ့အကျင့်သည် KYC နှင့် CDD လုပ်ငန်းစဉ်များ ရောစပ်ထားသည်။ KYC သည် သင်မည်သူဖြစ်သည်ကို သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် ငွေခဝါချမှု သို့မဟုတ် အထောက်အထားခိုးယူမှုတို့နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်မဟုတ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ CDD သည် သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်အတွက် ပွဲစားတွင် လိုအပ်သောဒေတာအားလုံးကို သေချာစေပါသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားစွန့်စားမှုမြင့်မားသည်ဟုယူဆသောအခါပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်လုံ့လဝီရိယရှိစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုစတင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်သုံးစွဲသူသည်နိုင်ငံရေးအရထိတွေ့ခြင်းခံရနိုင်သည်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်များသောနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ ဤဥပမာတွင် CFTC ပွဲစားသည်သက်ဆိုင်ရာဖောက်သည်အားအသေးစိတ်နှင့်ပြင်းထန်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမည်။
ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်အသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်စေ့စပ်သေချာစွာလေ့လာသည့်အစီရင်ခံစာကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီး CFTC သည်ပွဲစားပလက်ဖောင်းများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး၎င်းကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိ။ သင်ဟာပြက္ခဒိန်လအတွက်ပျမ်းမျှပေါင် ၂,၀၀၀ ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတဲ့အခါရုတ်တရက်တစ်လပေါင် ၁၅၀၀၀ ကိုစတင်ထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်၏ CFTC ပွဲစားသည်ဤသတင်းကိုအစီရင်ခံရမည်ဖြစ်ပြီးထိုငွေသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စီစဉ်လိမ့်မည်။
အမှားမလုပ်မိစေရန် - CFTC သည်သံလက်သီးဖြင့်အုပ်စိုးထားသည်။ ဤကော်မရှင်သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရတင်းကျပ်ဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ FCA နှင့် ASIC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကဲ့သို့ပင် CFTC ပွဲစားများအားလုံးသည်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ရန်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု ကုန်သွယ်မှုပမာဏ။
အခကြေးငွေ အတိအကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အသုံးပြုသည့် leverage နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်။
ပွဲစားမှ ဆောင်ရွက်သော အမှာစာများနှင့် ဖောက်သည် အကြား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခြားနားချက်။
အကယ်၍ ဤစာရင်းစစ်များသည်အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးနေပါကသို့မဟုတ်ပွဲစားသည်စည်းမျဉ်းများကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလိုက်နာနေသည်ဟုတွေ့ရှိပါက CFTC သည်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအားဒဏ်ရိုက်ရန်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင် CFTC သည်ပွဲစား၏ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ဘဏ်အကောင့်ခွဲထုတ်ခြင်းသည်နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး SEA Rule 40c15-3 (Securities Exchange Act) တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ခွဲခြားခြင်းသည် CFTC ပွဲစားများအတွက်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများအားလုံးသည်သင်၏အကောင့်ရန်ပုံငွေများကိုကုမ္ပဏီ၏အရင်းအနှီးနှင့်သီးခြားအကောင့်တစ်ခုတွင်သိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အကြောင်းရင်းများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည် - သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုယ်ပိုင်နှင့်ခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့် CFTC ပွဲစားသည်သင်၏ငွေကြေးကိုဆိုးဝါးသောဘဏ္financialာရေးရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီပြိုလဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
Forex တွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့် CFTC ပွဲစားများနှင့် ပတ်သက်၍ သြဇာအကန့်အသတ်ရှိသည်။
အဓိကငွေကြေးအတွဲများ Leverage ကို 1:50 တွင် ကန့်သတ်ထားသည်။
အသေးစားငွေကြေးအတွဲများ: (အခြားငွေကြေးအတွဲများဟုလည်းခေါ်သည်) Leverage ကို 1:20 တွင် ကန့်သတ်ထားသည်။
ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေးအတွဲများ: သြဇာ 1:20 မှအဖြစ်သို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအခွင့်အလမ်းများကိုကျော်လွှားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူဟုယူဆလျှင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်ဖြစ်ခဲ့ပါကသင်ရွေးချယ်ထားသည့် CFTC ပွဲစားသို့စာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုးကိုတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
CFTC သည်ငွေကြေးစျေးကွက်၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ကုန်သည်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအန္တရာယ်ရှိသည့်ကုန်သွယ်မှုအလေ့အကျင့်များ၊ ဘဏ္crimeာရေးရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များအားခြယ်လှယ်ခြင်းတို့အတွက်လုံးဝသည်းမခံခြင်းဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CFTC သည်ပွဲစားပလက်ဖောင်းများကိုလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းများနှင့်စံနှုန်းများစွာကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးကော်မရှင်သည်ဤစည်းမျဉ်းများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်လိုက်နာရန်သေချာသည်။
ထို့အပြင် CFTC ပွဲစားတစ် ဦး ချင်းစီသည် CFTC လိုင်စင်အသေးစိတ်ကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြသရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘဏ္sectorာရေးကဏ္ confidence ကိုယုံကြည်မှုရှိစေရုံသာမကကုမ္ပဏီ၏ဥပဒေအတွင်းလည်ပတ်နေသည်ကိုလည်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုလည်းရရှိစေသည်။
CFTC ပွဲစားနှစ် ဦး သည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၌ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လိုသောပစ္စည်းတစ်ခုထားရှိပါကစင်မြင့်ပေါ်တွင်မည်သည့်အရာကိုရနိုင်သည်ကိုအမြဲစဉ်းစားပါ။ ပွဲစားတစ်ယောက်သည် Forex ကိုသာရောင်းဝယ်နိုင်သော်လည်းအခြားတစ်ခုသည်လူသိများသောပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုသာကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ CFTC ပွဲစားမှတစ်ဆင့်မည်သည့်ဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာကိုသင်ကုန်သွယ်လိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသောပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းသည်သင့်အားကူညီသင့်သည်။
၎င်းသည်သင်ယခင်ကမရောင်းခဲ့ဖူးသောဖြစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်အရာကိုကြီးမားအလုပ်များအပေါ်ပြုမိဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် ယခုအခါကြမ်းပြင်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်မကြာခဏလွယ်ကူစွာသွားတွေ့နိုင်သည်။
သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်ရလိုလျှင် ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး ထိုအခါသင်သည်အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများအတွက်စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူရောင်းချနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဒါက Apple, Ford Motor Co, Amazon, Procter & Gamble တို့လိုကုမ္ပဏီမျိုးကိုဝင်ခွင့်ပေးတယ်။
'ကိုမှလာတဲ့အခါပျံ့နှံ့'ဒီပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားပေါ် - ဒီကို ask / bid အဖြစ်သရုပ်ဖော်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ရောင်းသူသည်မည်သည့်အရာကိုရောင်းမည်နှင့်ဝယ်သူက၎င်းအတွက်ပေးချေမည့်အကြားခြားနားချက်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းသည်နယူးယောက်နှင့်နယူးစတိတ်စတော့အိတ်ချိန်းများတွင် LSE (လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း) ကဲ့သို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်များသို့ရန်ပုံငွေများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင့်အားကူညီသည်။
ရှယ်ယာအရောင်းအ၀ယ်ပွဲစားများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အများအားဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သုံးမျိုးရှိသည်။ ပထမဦးစွာ၊ သင်ခိုင်းစေသောအမိန့်တိုင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးမည့် 'ကွပ်မျက်ပွဲစား' ရှိပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားကိုသင်ကုန်သွယ်လိုသော်လည်း ပိုမို၍ passive အတွေ့အကြုံရှိလိုပါကသင်လိုအပ်စရာမလိုသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရောင်း ၀ ယ်သည့်အတွက် 'အလိုအလျောက် CFTC ပွဲစား' သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ပွဲစားများသည်အလုပ်ပိုလုပ်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤပံ့ပိုးသူနှင့်ပေးဆောင်ရမည့်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
သင်အမိန့်များနေရာချထားခြင်းတွင်သင်မည်မျှပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအလယ်အလတ်နေရာတစ်နေရာတွင်ပိုနှစ်သက်ပါက 'အကြံပေးပွဲစား' ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဤပွဲစားအမျိုးအစားသည်လက်နှင့်လက်ကြားအကြားတွင်အတော်အတန်ကွာခြားသည်။
CFTC အကြံပေးပွဲစားကသင့်အားအကျိုးအမြတ်ရှိစေမည့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အကြံပြုချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးပါလိမ့်မည်။ ပွဲစား၏အကြံဥာဏ်ကိုသင်ရယူလိုသည်ဖြစ်စေ၊ မယူသည်ဖြစ်စေသင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခုသို့သွားရန်ညွှန်ကြားရန်သာလိုသည်။
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ညွှန်းကိန်းတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမတူညီတဲ့စတော့အိတ်အမျိုးမျိုးရဲ့ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုညွှန်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် FTSE 100 သည် LSE ရှိအကြီးမားဆုံးစတော့ ၁၀၀ ကိုခြေရာခံသည်၊ Hang Seng Index သည်ဟောင်ကောင်ရှိကုမ္ပဏီကြီး ၅၀ ကိုခြေရာခံသည်။
ထိုအခါသင်၌ NASDAQ နှင့် NYSE မှအကြီးစားကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော S&P 500 ရှိသည်။ Dow Jones သည်အမေရိကန်ကုန်သည်များနှင့်ရေပန်းစားသောအညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြတ်ငွေများပေးသောအကြီးစားအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ ၃၀ ကိုခြေရာခံခဲ့သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်း Forex အရောင်းအဝယ်မစတင်မီပွဲစားတစ်ယောက်သို့သင်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပွဲစားသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောငွေကြေးအတွဲ၌သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ထပ်မံပြောရလျှင်ပွဲစားရွေးသူအားလုံခြုံစိတ်ချရသောဝန်းကျင်တွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်သေချာစေရန်လိုင်စင်ရှိကြောင်းသေချာပါစေ။
CFTC forex ပွဲစားများအားလုံးသည် FIFO (ပထမ ဦး စွာ၊ ပထမ) ထုတ်ပြန်သည့်စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရမည်။ အမှန်ကတော့၊ ဆိုလိုတာက၊ အကယ်လို့သင်ဟာတစ်စုံတစ်ခုထက်ပိုပြီးအရောင်းအဝယ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်၊ ဘယ်ဟာမဆိုရှေ့မှာအရှည်ဆုံးရပ်တည်မှုကိုဖျက်သိမ်းရမယ်။
အဓိကငွေကြေးအတွဲများပါဝင်သည် USD / CAD, GBP / USD, EUR / USD, USD / JPY, NZD / USD, AUD / USD, USD / CHF နှင့် NZD / USD ။
အသေးစားငွေကြေးအတွဲများပါဝင်သည် EUR / GBP, CHF / JPY, GBP / JPY, GBP / CAD, EUR / AUD နှင့် NZD / JPY
ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေးအတွဲများပါဝင်သည် USD/HKD၊ AUD/MXN၊ NZD/SGD၊ EUR/TRY၊ GBP/ZAR နှင့် JPY/NOK။
သင်၏ CFTC ပွဲစားသည်ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင် ၂၄/၇ တွင်ကုန်သွယ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ သင် FX အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတွင်သင်မည်မျှပါဝင်ပတ်သက်သည်ကို မူတည်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ လက်ရှိဘဏ္newsာရေးသတင်းသတင်းများနှင့်စျေးနှုန်းဇယားများပါ ၀ င်သော CFTC ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုလိုပေမည်။
ဤအထူးပိုင်ဆိုင်မှုကိုတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ အချို့ကုန်သည်များကဤပိုင်ဆိုင်မှုကို“ ပျော့ပျောင်းသောကုန်ကြမ်းများ” နှင့်“ ခက်ခဲသောကုန်ကြမ်းများ” အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ သို့သော်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစွမ်းအင်၊ အဖိုးတန်သတ္တု၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အခြားစသည့်အမျိုးအစား ၅ မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
ရေနံစိမ်း WTIအပူပေးဆီ၊ Brent Crude၊
သန့်စင်ထားသော Terephthalic Acid (PTA)။
အီသနော၊ ပရိုပိန်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်း ဓာတ်ဆီ၊ RBOB။ ဓာတ်ဆီ (အောက်ဆီဂျင်ရောစပ်ရန်အတွက် ပြန်လည်ဖော်စပ်ထားသော ဓာတ်ဆီ)။
LME ကြေးနီ, LME နီကယ်။
ခဲ၊ သွပ်၊ အလူမီနီယမ်၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း။
ကိုဘော့, မိုလစ်ဘ်ဒီနမ်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော သံမဏိ။
အဖိုးတန်သတ္တုများ: ရှေပလက်တီနမ်၊ Palladium ငွေ.
ကျပန်းအရှည်သစ်နှင့် သစ်မာပျော့ဖတ်၊ သစ်မာပျော့ဖတ်။
ဝါဂွမ်း, ပြောင်းဖူး, ဂြုံOats၊ Rapeseed၊ ဆန်ကြမ်း။
Soybean, Soybean Meal, Soy Meal, Soybean Oil.
နို့၊ ကိုကိုး၊ ကော်ဖီ၊ Adzuki bean၊ Robusta ကော်ဖီ။
သကြား၊ အေးခဲထားသော လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်။
Lean Hogs၊ Live ကျွဲ၊ နွားအစာ။
အခြား - အုန်းဆီ၊ ရာဘာ၊ ပယင်းနှင့်သိုးမွှေး။
အကယ်၍ သင်သည် CFTC ပွဲစားတစ် ဦး မှကုန်ပစ္စည်းများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းသည်သင်စတင်ချင်သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးစျေးကွက်တွင်အများဆုံးရောင်းဝယ်မှုအများဆုံး cryptocurrencies အချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Binance အကြွေစေ့ (BNB) ။
ကမ်းလှမ်းချက်အမျိုးမျိုးတွင်ငွေကြေးပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးသင့် CFTC ပွဲစားနှင့်မည်သည့် cryptocurrencies ရရှိနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ သင် cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ရန်အတော်လေးအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်အာကာသများအတွက်ခံစားမှုရရန် demo အကောင့်တစ်ခုနှင့်အတူစတင်ချင်ပေလိမ့်မည်။
Great CFTC ပွဲစားတစ်ယောက်ဘယ်လိုရှာရမလဲ
ကုန်သွယ်ရေးသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်၊ ထို့ကြောင့်တရားဝင်အေဂျင်စီတစ်ခုမှမြင့်မားသောစံနှုန်းများနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဘယ်မှာရောက်နေတယ်၊ ​​၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဘာကိုမျှော်လင့်ရမယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။
အကောင်းဆုံး CFTC ပွဲစားများအတွက်သင်လိုက်လံရှာဖွေသင့်သည့်အရာများကိုစာရင်းပြုစုထားပါသည်။
လူအချို့ကသူတို့၏အစုစုကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအနည်းငယ်သို့သာတက်စေလိုသည်ဟုပြောရန်လိုသည် အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အကြောင်းမှာဘဏ္tradာရေးအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံး၏ဂျက်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားမည့်အစားပိုင်ဆိုင်မှုအချို့၏ကောင်းကျိုးများကိုလေ့လာခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ထိုဘဏ္,ာရေးတူရိယာများကိုသင်ကုန်သွယ်လိုသည့်အချိန်နှင့်အခြားတစ်ခုခုကိုကြိုးစားလိုသည့်အချိန်ရောက်လာနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့် CFTC ပွဲစားကိုမတူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများဖြင့်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ဤအရာသည်သင်လိုအပ်လျှင်သင့်အစုစုကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
CFTC ပွဲစားတစ် ဦး မှကမ်းလှမ်းသောပြန့်ပွားမှုတစ်ခုလုံးသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုကြီးမားစွာပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြန့်ပွား '' သုံးပြီးပုံဖော်နေသည်pips'' ဒါကသင်ရောင်းဝယ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ ၀ ယ်ဈေးနဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်တယ်။
ဥပမာတစ်ခုပေးရရင်၊ သင် Forex အတွဲကို အရောင်းအဝယ်လုပ်တယ်။ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ4pips ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူ, အရင်းကျေရန်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု4pips ကျော်တိုးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြန့်ပွားမှုများကဲ့သို့ကော်မရှင်အခကြေးငွေများသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် CFTC ပွဲစားများအားလုံးသည်မတူညီကြသဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ CFTC ပွဲစားတွေကတော့ဘယ်ကော်မရှင်မှမှမ ၀ င်ပါဘူး။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အခြားသူများသည်သင်လုပ်ဆောင်သောကုန်သွယ်မှုတိုင်းအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုယူသည်။
သင့် CFTC ပွဲစားတွင် ကော်မရှင်ခ 0.8% ရှိသည်။
သင် £3,000 ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ။
CFTC ပွဲစားသည် £24 ကော်မရှင် (£ 3,000 x0.8%) ကိုယူမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အတွက်သတင်းကောင်းမှာဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြသော CFTC ပွဲစားများသည်သင့်အားကော်မရှင်များကိုပေးစရာမလိုဘဲကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Tools များ
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပွဲစားများသည်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ သငျသညျအလိုအလျှောက်ကုန်သွယ်မှုကိုအသုံးပြု။ လုံးဝ passive ကုန်သည်မဟုတ်လျှင်, နည်းပညာ၏ကိရိယာများစျေးကွက်၏ယေဘုယျခံစားချက်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ကြွလာသောအခါအလွန်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။
အထူးသဖြင့်လေ့လာသူကုန်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများသည်စျေးကွက်အချက်အလက်များနှင့်သမိုင်းဇယားများကဲ့သို့သောအရာများကိုသင်ယူခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းတို့အတွက်အရေးကြီးသည်။ အလားတူပင်အချက်ပြကိရိယာများနှင့် backtesting များကစျေးကွက်၏ ဦး တည်ရာကိုခန့်မှန်းရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်စျေးနှုန်းများသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်းသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးရန်အခြားကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမှာသရုပ်ပြအကောင့်စက်ရုံတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်အားစျေးကွက်အခြေအနေများနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်စေသည်။ ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်မှုသည်သင်၏အတွေ့အကြုံမရှိသောပခုံးပေါ်တွင်လုံး ၀ မထိရောက်စေရန်၎င်းကိုဖြစ်စေ၊ Semi- အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကိုဖြစ်စေစမ်းကြည့်ပါ။
ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုသည်အရေးမပါသည့်အချိန်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါ။ စံပြကမ္ဘာတွင် CFTC ပွဲစား၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်သင့်အားတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ကူညီရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အမှန်မှာ အချို့က တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်သာ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် forex ကဲ့သို့ 5/24 စျေးကွက်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် သင့်အတွက် လုံလောက်မည်မဟုတ်ပေ။ တစ်နည်းဆိုရသော် သင်သည် ပိတ်ရက်များတွင် အကူအညီလိုလျှင် မြင့်မားပြီး ခြောက်သွေ့နေမည်ဖြစ်ပြီး တနင်္လာနေ့ နံနက်ခင်းသည် အချိန်နှောင်းသွားဖွယ်ရှိသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ဖောက်သည်များအတွက်မည်သည့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုရွေးချယ်မှုများကိုရရှိရန် (နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်) ရရှိရန်တိကျသောပွဲစားကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ အချို့ကအီးမေးလ်နှင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်သည်။
CFTC ပွဲစားတစ်ယောက်သည်ရွေးချယ်မှုများ၊ အခကြေးငွေများနှင့် protocol များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အနည်းငယ်ကွာခြားလိမ့်မည်ဟုသင်ယခုသင်စုဆောင်းမိခဲ့လိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါကသင်၏ပွဲစားစာရင်းအတွက်အသုံးပြုရမည်။ အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သံသယရှိသူများကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ်းလှမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းတွင်များသောအားဖြင့်ဘဏ်ငွေလွှဲနှင့်အကြွေး / အကြွေးကဒ်များပါ ၀ င်သည်။
ပြီးတော့ e-wallet လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ PayPal က, Skrill နှင့် Neteller သက်တောင့်သက်သာရှိမှုတို့အတွက် ရေပန်းစားလာနေပါတယ်။ အချို့ပွဲစားကုမ္ပဏီများသည် Bitcoin ကဲ့သို့သော cryptocurrencies ကိုအသုံးပြု၍ ငွေသွင်းရန်ပင်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်အလိုရှိသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုလက်ခံသော CFTC ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်တွေ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခုသင်၎င်း၏ရန်ပုံငွေမူဝါဒကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အချို့ပွဲစားကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များအားငွေသွင်းရန် (သို့) ထုတ်ယူရန်အတွက်အခကြေးငွေပေးကြသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များကိုပလက်ဖောင်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်တွေ့နိုင်သည်။
ရန်ပုံငွေအချိန်သတ်မှတ်ချက်များအရဆိုဒ်တစ်ခုစီသည်အနည်းငယ်ကွာခြားသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းအများစုသည်သင်၏ဒက်ဘစ် / ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ် e-wallet သိုက်များကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ချက်ချင်းကုန်သွယ်ခြင်းကိုစတင်နိုင်သည်။ သင်သည်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အနိမ့်ဆုံးအပြောင်းအလဲအချိန်ပေးသောဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့်ငွေသွင်းရန်သင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါကဖြစ်သည်။
ထုတ်ယူခြင်းကိစ္စရပ်အတွက်ရက် (၂) ရက်အတွင်းပွဲစားများမှပြုလုပ်သင့်သည်။
CFTC အကောင့် Options ကို
Nano၊ Micro နှင့် Mini Accounts
ကုန်သည်အများစုသည်သာမန်ပွဲစားများအကောင့်တစ်ခုကိုကြားဖူးကြသော်လည်း nano, micro နှင့် mini အကောင့်များသည်ရေနွေးငွေ့တက်နေသည်။ ဒီအသေးစားအကောင့်တွေဟာအရင်းအနှီးတွေအများကြီးမစွန့်စားချင်တဲ့လူသစ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အလားတူပင်၎င်းတို့သည်ငွေကြေးနည်းသောနည်းဗျူဟာအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသုံးလိုသည့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များနှင့်သင့်တော်သည်။
ဤကဲ့သို့သောအကောင့်အမျိုးအစားကိုသင်မတွေ့ပါက CFTC ပွဲစား၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုသင့်သည်။ သူတို့ကသင့်ကိုကိုက်ညီမယ့်စံသတ်မှတ်ချက်အကောင့်တစ်ခုကိုလိုချင်လိမ့်မယ်။
၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏နောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်လိုသည်ဆိုပါကအစ္စလာမ့်မှတ်တမ်းများကိုသတိထားပါ။ ရှရီယာဥပဒေအရ - အတိုးနှုန်းကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ပေးဆပ်ခြင်းကိုလုံးဝတားမြစ်ထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏နောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဤကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုမမြင်တွေ့ရပါက CFTC ပွဲစားသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းမှာအန္တရာယ်မရှိပါ။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သူတို့သည်သင့်အား 'swap-free account' ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တစ်ညတာတွင်ရာထူးများအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သရုပ်ပြအကောင့်များအကြောင်းအတော်များများပြောကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အတွေ့အကြုံအားလုံးရှိကုန်သည်များအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပွဲစားများအားလုံးသည်ဖောက်သည်များသို့သရုပ်ပြအကောင့်များမပေးကြပါ။ သို့သော်၎င်းသည်စင်မြင့်သို့လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုရှိမရှိသိရန်များသောအားဖြင့်လွယ်ကူသည်။
အရေးကြီးသည်မှာသရုပ်ပြအကောင့်များသည်သင့်အားမည်သည့်ငွေကိုမျှမစွန့်စားဘဲကုန်သွယ်မှုပြုရန်ခံစားခွင့်ပေးသည်။ ထပ်မံ၍ ၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွှာအသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
ယနေ့ CFTC ပွဲစားနှင့်အတူစတင်ပါ
CFTC ပွဲစားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့မက်ထရစ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်ပို့ချ၏အရေးပါမှုကိုငါသိ၏ မည်သည့်ပွဲစားပလက်ဖောင်းမှမကျူးလွန်မီအချို့သောသုတေသန။
ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံး CFTC ပွဲစားများစာရင်းသို့မရောက်မီအောက်တွင် sign-up ဖြစ်စဉ်မည်သို့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်ကိုအသေးစိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။
အဆင့်တစ်: CFTC ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖွင့်လှစ်
ကုန်သွယ်မှုစတင်နိုင်ရန်သင်သည်သက်ဆိုင်ရာ CFTC ပွဲစားနှင့်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ Sign-up / create account ခလုတ်ဟာများသောအားဖြင့်သင်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဤသူသည် KYC လုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီးသင်ပွဲစားသည်သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်နေထိုင်ရာကိုအသိပေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏မွေးသက္ကရာဇ်၊ လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုလည်းဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့်နှစ် - အထောက်အထားသက်သေပြပါ
သတ်မှတ်ထားသော CFTC ပွဲစားများသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကိုတင်ယူရန်လိုအပ်သည်။
သင့်အနေဖြင့်လတ်တလောအသုံးအဆောင်ငွေတောင်းခံလွှာ (သို့မဟုတ်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံနှင့်လူနေအိမ်လိပ်စာနှင့်ဆင်တူသည့်အရာ) နှင့်သင်၏ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းအနည်းငယ်ဖြေဆိုရန်မိတ္တူတစ်စောင်ပေးရန်လည်းလိုအပ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည် အများအားဖြင့် ရိုးရှင်းသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ drop-down menu (ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်စသည်ဖြင့်) မှ ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပြီး သင်မည်မျှငွေသွင်းလိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ အရောင်းအ၀ယ်အခကြေးငွေနှင့် အကောင့်အနည်းဆုံးပမာဏကို စောင့်ကြည့်ပါ။
အဆင့်လေး - အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း / သရုပ်ပြအကောင့်ကိုစတင်ပါ
သင်အလိုရှိပါကသင်၏အကောင့်ရန်ပုံငွေအဖြစ်ချက်ချင်းစတင်နိုင်သည်။ သငျသညျကျဆင်းရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလျှင်သင် demo အကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤသည်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသည့် CFTC ပွဲစားသည်ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံကမ်းလှမ်းသည့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်သည်။
2022 ၏အကောင်းဆုံး CFTC ပွဲစားများ - ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများ
သငျသညျညာဘက်မဟုတ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကုန်သွယ်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင် 2022 XNUMX ၏အကောင်းဆုံး CFTC ပွဲစားများ၏စာရင်း။ ပွဲစားတစ် ဦး ချင်းစီယှဉ်ပြိုင်အခကြေးငွေ, ကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အမှိုက်ပုံနှင့်သင်တန်း - အရေးကြီးသော CFTC လိုင်စင်။
၁။ IG- MetaTrader1 နှင့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်
ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စတော့များ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ငွေကြေးအတွဲများအပါအ ၀ င်ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကိုစျေးကွက် ၁၇၀၀၀ ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Forex အတွဲတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေရွေးချယ်စရာအမှိုက်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ရွေးချယ်စရာတွေနည်းလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာမကြာခဏပြောင်းရွှေ့သွားလေ့ရှိသည့်ကုန်သည်အမျိုးအစားဖြစ်လျှင် IG အက်ပလီကေးရှင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ CFTC ပွဲစားသည် Android app နှင့် iOS (သင်နှင့် iPhone ရှိသူများအတွက်) တွင်အလုပ်လုပ်ရန် app ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိလွယ်ကူစွာငွေသွင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းစွမ်းရည်ကိုဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲသင်မျက်နှာပြင်၏ထိခြင်းဖြင့် ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ IG သည် MetaTrader4 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤသည်အလွန်လူကြိုက်များသောတတိယပါတီပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအလိုအလျောက် Forex Trading စနစ်များကိုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးအဆင့်မြင့်သုတေသနကိရိယာများဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။
IG ဖြင့်စတင်ရန်အနိမ့်ဆုံးငွေသွင်းငွေမှာပေါင် ၂၅၀ (ဒေါ်လာ ၃၂၀ ခန့်) ဖြစ်ပြီးသင်ဘဏ်အကောင့်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက် - ငွေသွင်း / ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုပေးနိုင်သည်။ ဤအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီသည် CFTC, FCA, ASIC နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများမှလိုင်စင်များကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
လေးစား CFTC ပွဲစား
2. Forex.com - MT4 နှင့်ကုန်သွယ်ရန်
CFTC ပွဲစားသည် Forex အတွဲ ၉၀ ကျော်အပြင် cryptocurrencies သတ္တုကဲ့သို့သောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ Forex.com သည်ကော်မရှင်၏စည်းကမ်းချက်များအရမည်သည့်အရာမျှမကောက်ခံနိုင်ပြီးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Forex.com တွင်အာကာသအတွင်းအကောင်းဆုံးပြန့်ပွားမှုအချို့ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည့်အနိမ့်ဆုံးငွေပမာဏမှာဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်ပြီး၊ သင်မှာယူမှုတစ်ခုလျှင် $ ၁ သာမျှဖြင့်စတင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လက်လီရောင်းချသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လျှင်၊ သင်သည်စီမံခန့်ခွဲမှု ၁:၅၀ အထိလက်လှမ်းမီနိုင်လိမ့်မည်။ စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးအသွင်အပြင်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများအကြောင်းဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
စျေးကွက်တွင်နည်းနည်းအတွေ့အကြုံနည်းသူများအနက် Forex.com သည်ဖောက်သည်အားလုံးကိုသူတို့၏စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန် demo account တစ်ခုပေးသည်။ သင် MT4 သို့မဟုတ် Forex.com ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်တွင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ဤပွဲစားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိအခြားသူများကဲ့သို့ CFTC မှအပြည့်အ ၀ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပြီးလိုင်စင်ရသည်။
မလှုပ်မရှားအခကြေးငွေ $ 15 (၁၂ လအတွင်း)
ယခု Forex.com သို့လာရောက်ပါ
ဤသည် CFTC ပွဲစားသည်၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုန်သွယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ပညာရေးကုန်သွယ်ရေး tools များကြောင့်ထင်ရှား၏။ အကယ်၍ သင်သည်အမြောက်အမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါကသင်ကံကောင်းပါစေ - ဤကုမ္ပဏီသည်သာမာန်ပျမ်းမျှပမာဏကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသူများအတွက်အခကြေးငွေသက်သာစေသည်။
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်ဤပွဲစား၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည် - သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့်လုပ်နိုင်သည် Oanda သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအကျိုးအများဆုံးဖြစ်စေရန်ကုန်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးသင်တို့၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီရန်ရှိပြီးသားဇယားကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တကယ်နှစ်သက်သည်။
Oanda သည်ကုန်သည်များကိုအပြိုင်အဆိုင်ပြန့်နှံ့စေသည်။ အထူးသဖြင့် EUR / GBP ကဲ့သို့သောအဓိကအတွဲများကိုသုံးသောအခါ။ သြဇာသက်ရောက်လာသောအခါ Forex ကုန်သည်များသည် CFTC ကန့်သတ်ချက်များအရ ၁း၅၀ တွင်အနိမ့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိသွားကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစည်းမျဉ်းပွဲစားများနှင့်ပရီမီယံအကောင့်တစ်ခုကိုလိုချင်လျှင် $ 1 နိမ့်ကျစွာထုတ်ယူရပါလိမ့်မည်။
ပရီမီယံအကောင့်အတွက် $ 20,000 နိမ့်ဆုံး
ယခု Oanda သို့သွားပါ
၄။ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ပွဲစားများ - ထုတ်ကုန်နှင့်စျေးကွက်အမျိုးမျိုး
ဤပလက်ဖောင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကျော်ကြားဆုံးပွဲစားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီး CFTC နှင့် SEBI (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Securities and Exchange Board) မှလိုင်စင်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်အတော်လေးလွယ်ကူပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိစျေးကွက် ၉၀ ကျော်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ယင်းတွင်ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ETF များ၊ စတော့များနှင့် Forex များပါဝင်သည်။ သင် Interactive Brokers ကိုစာရင်းသွင်းချင်လျှင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤ site သည် API, NinjaTrader နှင့်အလိုအလျောက် EA အမျိုးမျိုးနှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သည်
စျေးကွက် ၉၀ ကျော်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း
အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀ နိမ့်ဆုံးသိုက်သည်အစပြုသူများအတွက်အလွန်များလွန်းသည်
ယခု Interactive ပွဲစားများသို့သွားပါ
5.TD Ameritrade - ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ကောင်းမွန်သည်
အကယ်၍ သင်သည်ရေရှည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောကုန်သည်အမျိုးအစားဖြစ်လျှင် TD Ameritrade သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။ CFTC ပွဲစားသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်ပြီးပြည်တွင်း၌လူသိအများဆုံး platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ TD Ameritrade သည်အနှစ် ၅၀ နီးပါးလှည့်လည်ခဲ့ရာရာစုနှစ်တစ်ဝက်ပွဲစားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပြီးနောက်၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းကျော်စောခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဤပွဲစားကုမ္ပဏီသို့စာရင်းသွင်းသောအခါသင်သည်အမျိုးမျိုးသောအာမခံအမျိုးမျိုးကိုလက်လှမ်းမီသည်၊ အများစုကိုသင်ခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်ချက်ချင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသာမကကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသိအများဆုံးစတော့အိတ်ချိန်းသို့ ၀ ယ်ယူသူများအားပါ ၀ င်ခွင့်ပေးထားပါသည်။ ၎င်းတွင် NASDAQ, NYSE နှင့် LSE တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဒီ CFTC ပွဲစားထံမှကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် Forex (တစ်ခုလုံးကို Forex ဌာနခွဲ), ​​ရွေးချယ်စရာများ, စတော့ရှယ်ယာ, အနာဂတ်နှင့်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီမှတဆင့် IPOs များတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ပွဲစားအခကြေးငွေနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများသို့မဟုတ် ETFs များသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါမည်သည့်ကော်မရှင်မျှမပေးဘဲကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ဤကော်မရှင်မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်မှုကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိသည် - သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအနည်းဆုံးရက် ၃၀ ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသို့မလုပ်ပါကကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီအတွက်အပိုဆောင်းဒေါ်လာ ၁၃.၉၀ ပေးရပါမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါကပိုမိုအကျိုးရှိသည်။ TD Ameritrade သည် CFTC အောက်တွင်တင်းကြပ်စွာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောကုမ္ပဏီနှင့်သင်ဆက်ဆံနေကြောင်းသင်သိသည်။
အကယ်၍ သင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ / ETF ကိုတစ်လကျော်ထားလျှင်သုညရောင်းဝယ်မှု
အခုဆိုရင် TD Ameritrade သွားရောက်ကြည့်ရှု
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ ၀ တ်ဆင်သော ၀ ံပုလွေများများပြားသောကြောင့် CFTC ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်လုံးဝအရေးကြီးသည် - သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှတရားဝင်လိုင်စင်ကိုင်ထားသူဖြစ်သည်။
ဒါဟာမသေချာမရေရာတဲ့နေရာမှာသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဤကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏တရားဝင်လိုင်စင်ကိုအလွယ်တကူမရရှိကြပါ။ အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်သင်လုံခြုံစိတ်ချရသောကုန်သွယ်မှုဂေဟစနစ်ကိုရောင်းလိုပါကဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော CFTC ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
ယူအက်စ်တွင်အခြေ ပြု၍ CFTC သည် 'ကုန်စည်ဒိုင်များကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်' ကိုဆိုလိုသည်။ ဤအေဂျင်စီသည်ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်များကိုထိန်းညှိရန်နှင့် CFTC ပွဲစားများဥပဒေတွင်လည်ပတ်ရန်သေချာစေရန်လုပ်ဆောင်သည်
သင်ကုန်သွယ်နိုင်သည့်အရာသည်အမှန်တကယ်ပေါ်တွင်သင်စာရင်းသွင်းထားသည့် CFTC ပွဲစားအပေါ်မူတည်သည်။ အချို့ပွဲစားများသည်ကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပေးနေသော်လည်းအချို့သည်အချို့ကိုသာအနည်းငယ်အာရုံစိုက်သည်။
CFTC ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသုံးတာကဘေးကင်းလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ CFTC ပွဲစားကိုသုံးတာဟာအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ CFTC လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသည့်မည်သည့်ပွဲစားမဆိုတင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ CFTC ပွဲစားများအားလုံးသည်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးယုံကြည်စိတ်ချထိုက်ကြသည်။
ကျွန်တော် cryptocurrency တစ် CFTC ပွဲစားမှတဆင့်ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
ဟုတ်တယ်။ 2015 ခုနှစ်တွင် CFTC ကုန်စည်အဖြစ်အဆင့်အတန်းခံရဖို့ cryptocurrencies တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် cryptocurrencies ကို CFTC မှထိန်းချုပ်သည်။
ပွဲစားတစ် ဦး အားစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့သေချာစေနိုင်သနည်း။
CFTC ပွဲစားများအားလုံးသည်လိုင်စင်နံပါတ်ကိုဖောက်သည်များအားရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန်လိုအပ်သောကြောင့်ပွဲစားကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ။ သင်မသေချာလျှင် NFA ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော BASIC (နောက်ခံ Affiliation Status Information Center) သို့သွားပါ။ အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့သင်ကတရားဝင်သည်သေချာစေရန်လိုင်စင်နံပါတ်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။